Donald Trump Archives - नेपाल आज
Donald Trump	वर्ल्ड
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बशर अल असदलाई दिए ‘कसाइ’को संज्ञा
चैत ३१ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई ‘कसाइ’को संज्ञा दिएका छन् । नेटोको महासचिव जेन्स स्टाल्टेनबर्गसँग संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा उनले सिरियामा भएको नागरिकको नरसंहार रोक्न ढिला भइसकेको भन्दै तत्काल गृहयुद्ध अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । गत हप्ता सिरियाली शासकले रासायनिक आक्रमण गरी आफ्नै देशका नागरिकको आमहत्या गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आलोचना भइरहेको […]
डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रेम जीवन अस्थिर खालको छ । उनले अहिलेसम्म तीन जनासँग बिहे गरिसकेका छन् । उनका पाँच जना छोराछोरी र आठ नातिनातिना छन् । ट्रम्पको अघिल्ला दुई विवाह सम्बन्ध विच्छेदमा टुंगिएका थिए । मोडल मिलानिया नउससँगको उनको विवाह चाहिँ अझै टिकिरहेको छ । फेसन उद्योगमा रुचि राख्ने ट्रम्पले […]
ट्रम्पले बुझाएको करको बारेमा ह्वाइटहाउस रुष्ट
Posted on: March 15, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत २ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुझाएको कर सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको छ । विवरण चुहाएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस भने रुष्ट बनेको छ । कर सम्बन्धी विवरण प्रकाशित गर्नु गैर कानुनी भएको भन्दै ह्वाइट हाउसले आलोचना गरेको छ । अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क एमएसएनबीसीले ट्रम्पले सन् २००५ मा बुझाएको कर सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक […]
सत्ता सम्हालेको एक महिनामै ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने अभियान सुरु
Posted on: February 28, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन १७ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हालेको एक महिनामात्र भएको अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउन अभियान सुरु गरिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका केही योजना र उनले दिदैं आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्ने र छोटो समयमै बर्खास्त हुन सक्ने अनुमान गरिएकै समयमा क्यालिफोर्नियाको रिचमण्ड सिटी काउन्सिलले सर्वसम्मतिबाट ट्रम्पविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव […]
फागुन १५ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्ध झनझन चिसिंदै गएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी अप्रिल २९ तारिखका दिन हुने ह्वाईट हाउसका संवाददाताहरुको समूहको डिनर बष्हिकार गर्ने घोषणा गरेपछि सम्बन्ध झनै चिसिएको हो । आफूविरुद्धका आलोचनात्मक समाचारलाई गलत तथा अतिरञ्जित बताउँदै आएका ट्रम्पले लगातार एक पछि अर्को कार्यक्रममा सञ्चार माध्यमको तिखो […]
‘ट्रम्प मेरो राष्ट्रपति होइन’
फागुन – १० ।अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने दशौं हजार प्रदर्शनकारीले ट्रम्प आफ्नो राष्ट्रपति नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। न्युयोर्कमा सोमबार भएको प्रदर्शनमा अमेरिकाका अन्य सहरका नागरिक पनि सहभागी भएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको एक महिना भएकै दिन उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । ट्रम्पले गत जनवरी २० तारिखका दिन राष्ट्रपतिको कार्यभार […]
ट्रम्पले गरे १ सय कर्मचारी बर्खास्त
फागुन १० । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।लेफ्टिनेन्ट जेनरल एच आर मैक्मास्टरलाई नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हो । यसअघि नियुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लिनले रुससँग विशेष सम्बन्ध भएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो । अफगानिस्तान र इराकमा काम गरेका जेनरल मैक्मास्टर निकै सुझबुझ राख्ने, प्रष्ट […]
संचारमाध्यम बेइमान भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप
Posted on: February 17, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन ६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले प्रेस जगत नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भन्दै मीडियाको तीखो आलोचना गरेका छन् । उनले शुरुवाती दिनमा आफूले निकै राम्रो काम गरे पनि सञ्चारमाध्यमले त्यसको आलोचना गरेको भन्दै मीडियाप्रति रोष प्रकट गरेका हुन् । ह्वाइट हाउसमा बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेलगत्तैदेखि देशभित्र र बाहिर आफूले अफ्ठ्यारा परिस्थितिमात्र ब्यहोर्नु […]
नेपाली महिलालाई ट्रम्पको धक्का
Posted on: February 12, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन १ । सन २००२ को एक विहान पत्रकार सुबिना श्रेष्ठले काठमाडौंको जेलमा १५ वार्षिया सीता तामाङलाई भेटेकी थिइन । तामाङलाई बिवहा गर्ने बाचा गरेर प्रेमीले गर्भवती बनाएका थिए । पछि प्रेमीले उनलाई शक्ति दिने भनेर एक चक्की दिए जसले उनको गर्भपतन गरायो । गैरकानुनी कदमका लागि अदालतले उनलाई जन्मकैद सुनायो । सन ९० को […]
ट्रम्पलाई अर्को झड्का, आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लागएको निर्णय खारेज
माघ २८ । आप्रवासीलाई एक सय २० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी निर्णय अदालतले खारेज गरेको छ । नाइन्थ सर्किट कोर्टका तीन जना न्यायाधीशले एक सय २० दिने प्रतिवन्धसँगै सात मुस्लिम देशका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा लगाएको रोक पनि खारेज गरेको छ । कार्यकारी निर्णय रोक्ने तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध […]
ट्रम्पलाई एप्पल, फेसबुक र गूगलको चुनौति
माघ २५ । एप्पल, फेसबुक, गूगलसहितका अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूला ९७ प्रविधि कम्पनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धविरुद्ध सामूहिक रुपमा कानूनी चुनौति दिएका छन् । ट्रम्पको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो व्यापारमा ठूलो नोक्सान भएको भन्दै उनीहरुले कानूनी चुनौति दिएका हुन् । सानफ्रान्सिस्को अदालतमा चलेको मुद्दामा उनीहरुले सात मुस्लिम मुलकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आफ्ना […]
अमेरिकामा कुनै गम्भिर परिस्थिति आइलागे अदालतले जिम्मा लिनु पर्ने ट्रम्पको चेतावनी
Posted on: February 6, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ २४ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो निर्देशन लागु गर्न नदिने अदालती निर्णयका कारण कुनै गम्भीर परिस्थिति सृजना भए त्यसको जिम्मेवारी निर्णय गर्ने न्यायाधीश र अदालती पद्धतीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । सात मुस्लिम मुलुकका नागरिकलाई रोक्न जारी गरिएको कार्यकारी आदेश लागु गराउन गरिएका सबै प्रयास एकपछि अर्को गर्दै अदालतले विफल पारिदिएपछि क्रुद्ध […]
ट्रम्पद्वारा रद्द गरिएका १ लाख भिषा अदालतद्वारा फुकुवा
माघ २३ । अमेरिकी राष्ट्रपति ड्रोनाल्ड ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध आदेशविरूद्ध अमेरिकाको वाशिङ्टन राज्यस्थित सियाटलका एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार फैसला गरेका छन् । सात मुस्लिम वाहुल देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशलाई सियाटलका न्यायाधीश जेम्स रोबर्टले अस्थायी रूपले राष्ट्रव्यापी स्तरमा रोक लगाएको हो । अब ती सात मुलुकका भिसाधारी यात्रुको अमेरिका प्रवेश गर्ने […]
राष्ट्रपति ट्रम्पका निर्णयले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग, अमेरिका र विश्वभर आलोचना
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग बेस्सरी रिसाए ट्रम्प
माघ २० । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलसँगको फोनवार्ता रिसाएर छोट्याएका छन् । जनवरी २८ का दिन करिब एक घण्टाका लागि तय गरिएको सो फोनवार्ता ट्रम्पले २५ मिनेटमै समाप्त गरेका थिए । अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीच भएको शरणार्थी सम्झौताको विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री टर्नबुलबीच फोनवार्ताकै क्रममा मतभेद भएको हो । बोल्दाबोल्दै ट्रम्प […]
मन्त्री छनोट प्रक्रियालाई डेमोक्रेट सांसदहरुद्धारा बहिष्कार
माघ १९ । अमेरिकी सिनेटमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मनोनित गरेका दुई मन्त्रीका उम्मेदारको छनौट गर्ने मतदान प्रक्रिया डेमोक्रेट सांसदहरुले बहिष्कार गरेका छन् । ट्रम्पले शपथ लिएको दोस्रो हप्तामै उनको छनौटविरुद्ध भएको बहिष्कारसँगै मतदान प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ । मनोनित स्वास्थ्य मन्त्री टम प्राइस र अर्थ मन्त्री स्टीफन मनुशिनको आर्थिक गतिविधिको बारेमा थप जानकारीको माग गर्दै […]
महान्यायाधिवक्ता र सयौं कुटनीतिज्ञ ट्रम्प नीतिको विरुद्धमा, ओबामा असन्तुष्ट
Posted on: January 31, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ १८ । अमेरिकी न्याय विभागले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासीसम्बन्धि आदेशको प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरेको छ । निमित्त महान्यायाधिवक्ता सल्ली याटेसले राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेश कानूनसम्मत नरहेको भन्दै उक्त आदेशका पक्षमा कानून विभागले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने प्रष्ट गरेका हुन् । निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा नियुक्त याटेसले मातहतका कर्मचारीका नाममा निकालेको विज्ञप्तिमा आफूहरु ट्रम्पको तर्कसँग सहमत […]
ट्रम्पविरुद्ध बेलायतमा हस्ताक्षर अभियान, १० लाखभन्दा वढीले हस्ताक्षर
Posted on: January 30, 2017Posted by: netra
माघ – १७ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बेलायत प्रवेशमा रोक लगाउन माग गर्दै बेलायता हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले ट्रम्पलाई बेलायत भ्रमणको निम्तो दिएकी थिइन् । ट्रम्पको भ्रमणको विरोधमा बेलायती नागरिकहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाइएका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको भ्रमण रोक्न माग गर्दै अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । […]
भिसा भएकाहरुलाई अमेरिका आउन दिनू भन्ने अदालतको आदेशले ट्रम्पलाई झड्का
माघ १६ । अमेरिकाको एउटा अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशविरुद्ध स्टे अर्डर जारी गर्दै प्रतिबन्धित मुस्लिम देशबाट भिसा भएका वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट तत्काल फिर्ता पठाउन रोक लगाएको छ । द अमेरिक सिफिल लिबरेटिज युनियन (एसिएलयु) ले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । ट्रम्पको निर्णयका […]
ट्रम्पको आदेशलगत्तै विमानस्थलबाटै शरणार्थी पक्राउ
माघ १६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थीलाई कडाई गर्न आदेश दिएलगत्तै अमेरिकी विमानस्थलबाटै शरणार्थी पक्राउ गरिएको छ । न्यूयोर्कमा हिरासतमा लिइएका शरणार्थीलाई रिहाई गर्न केही मानवअधिकारवादी संगठनहरुले कानूनी बाटो अख्तियार गरेका छन् । ट्रम्पको आदेशलगत्तै जोन एफ केनेडी विमानस्थलबाट दुई इराकी शरणार्थीलाई हिरासतमा लिइएको हो । जसमध्ये एक जना अमेरिकी सेनाका लागि अनुवादकको काम […]
सिरियासहित ६ देशका शरणार्थिको लागि अमेरिकी ढोका बन्द
Posted on: January 28, 2017Posted by: netra
माघ – १५ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सीरिया प्रवासिलाई अघिल्लो आदेशसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । यसको साथै ट्रम्पले इरान, इराक, यमन र लिबियासमेत गरी छ अन्य मुस्लिम देशका नागरिकको लागि तीन महिनसम्मका भिसा जारी गर्न रोक लगाएका छन् । कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादीलाई अमेरिका छिर्न नदिन ट्रम्पले धेरै ठूला कदम उठाएका छन् । हालै […]
७० लागिसकेका ट्रम्पले कस्तो खाना खान मनपराउँछन् होला ?
Posted on: January 27, 2017February 1, 2017Posted by: netra
विश्व शक्ति केन्द्र अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको उम्मेदारीदेखि नै चर्चामा रहेका डोनाल्ड जे ट्रम्पप्रतिको चासो सपथग्रहणपछि अझै चुलिएको छ । ट्रम्पका सामान्य व्यवहार र उनले गर्ने सामान्य कुराले पनि चर्चा पाइरहेको छन् । उमेरले ७० लागिसकेका ट्रम्पले कस्तो खाना खान मनपराउँछन् होला ? पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा स्वस्थ र सन्तुलित भोजनका पारखी थिए । ओबामा फलफूलका पारखी […]
पर्खाल लगाउने खर्च उठाउन मेक्सिकोमाथि कर लगाउने ट्रम्पको तयारी
Posted on: January 27, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ १४ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोका सामान आयातमा कर लगाउने तयारी गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने खर्च जुटाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोमाथि कर लगाउने तयारी गरेका हुन् । उनले मेक्सिकोका सामान आयातमा २० प्रतिशत कर लगाए वार्षिक करिब १० अर्ब डलर राजश्व संकलन हुने दाबी गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले मेक्सिकोबाट […]
ट्रम्पद्धारा मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउन र अवैध आप्रवासिलाई देश निकाला गर्न आदेश
माघ १३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा पर्खाल लगाउन कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । ट्रम्पले मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा पर्खाल लगाउन, सिमा सुरक्षा बल बढाउन र कागजपत्रविहिन आप्रवासीलाई देशनिकालाको संख्या बढाउन आदेश दिएका छन् । ट्रम्पको यो आदेशलाई अमेरिकी अध्यागमनलाई नयाँ स्वरुप दिने ट्रम्प यात्राको पहिलो कदमका रुपमा हेरिएको छ । ट्रम्पले […]
ट्रम्पले उल्ट्याए ओबामाको निर्णय
माघ ११ । अमेरिका १२ देश सम्मिलित ब्यापार सम्झौता ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीप टीपीपीको सदस्य राष्ट्रबाट बाहिरिएको छ । आफूले निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टीपीपीबाट बाहिरिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा १२ राष्ट्र सम्मिलित टीपीपी सम्झौता गरिएको थियो । टीपीपी सम्झौताले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रमा […]
पत्रकार नै संसारका सबै भन्दा बेइमानः ट्रम्प
Posted on: January 23, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ १० । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारमाध्यम संसारकै सबैभन्दा बेइमान भएको आरोप लगाएका छन् । कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिन अमेरिकी गुप्चतर निकाय सीआईए मुख्यालयमा वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग भेट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सञ्चारमाध्यम संसारकै सबैभन्दा बेइमान भएको बताएका हुन् । आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा मानिसहरुको उपस्थितिलाई लिएर प्रकाशित तथ्यांक र सामाग्रीका विषयमा ट्रम्पले आक्रोस व्यक्त गरेका हुन् […]
डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध बेलायतमा प्रदर्शन
Posted on: January 22, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ ९ । अमेरिकाको निकट मित्र मानिएको बेलायतमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्न पाउँदा नपाउँदै व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । एक लाख सर्वसाधारण सहभागी ठानिएको प्रदर्शनमा महिलाको संख्या उल्लेख्य थियो । अमेरिकाको वाशिङटनमा भएको वीमेन्स मार्च अन वाशिङटनको समर्थनमा बेलायतमा पनि प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा बेलायतका मेयरदेखि टेलिभिजनका प्रस्तोताहरु समेत सहभागी बने […]
डोनाल्ड ट्रम्पले आज सपथ लिंदै, ह्वाइट हाउसमा भव्य तयारी
Posted on: January 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ ७ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पले शुक्रबार९आज० पद तथा गोपनियताको सपथ लिदैछन् । उनले आजैदेखि जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै छन् । ह्वाइट हाउसमा हुने भव्य समारोहमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिनेछन् शपथका लागि भव्य तयारी भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै रिपब्लिकन ट्रम्प निर्वाचित भएका थिए […]
डोनाल्ड ट्रम्पले दिए जर्मन चान्सलरलाई कडा चेतावनी
माघ ३ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन चान्सलर एञ्गेला मर्केलले १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्न दिएर ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन् । मर्केल यूरोपको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेता भएको भन्दै ट्रम्पले यूरोपियन यूनियन जर्मनीको लागि साधन भएको उल्लेख गरे । उनले आप्रवासीहरु विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने दोर्होयाए । ब्रिटेन र […]
चीनले ट्रम्पलाई दियो खतरनाक चेतावनी
माघ ३ । चीनले ‘एक चीन नीति’ बहसको विषय नभएको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले पटक पटक एक चीन नीतिका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका बेला चीनले यो बहसको विषय नभएको बताएको हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु क्वांगले एक चीन नीति दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार भएको भन्दै यस विषयमा बहस नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी […]
आफ्ना जासुससंग आक्रोशित डोनाल्ड ट्रम्प
पुस २८ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी जासूसी संस्थाहरुविरुद्ध आक्रोशित भएका छन् । रुससँग आफ्ना विरुद्ध निकै गोप्य र खतरनाक प्रमाणहरु रहेको भन्ने सूचना सार्वजनिक गराइएको भन्दै उनले आफ्नै देशका जासूसी संस्थाहरुविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका हुन । रुससँग ट्रम्पको विरुद्धमा आपत्तिजनक जानकारी भएको भन्ने जस्ता सूचना चुहाउन पनि जासूसी निकायहरुकै हात रहेको हारोप […]
पुस २७ । अमेरिकी सरकारको युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) ले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै अमेरिकाबाट २५ जना नेपालीहरुलाई अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएको जनाएको छ । उनीहरुमध्ये प्राय मेक्सिकोबाट गैर कानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने प्रयास गर्दा सीमाक्षेत्रमा समातिएकाहरु हुन् । उनीहरु आर्थिक वर्ष २०१६ को अवधि अमेरिकाबाट देशनिकालामा परेकाहरु हुन् । युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम […]
आगामी जनवरी २० देखि ह्वाइट हाउस चलाउने तयारी गरिरहेका अमेरिकाका ४५ औं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै मुलुकका अमेरिकी राजदूतलाई अमेरिका फर्कन आदेश दिएका छन् । उनले सपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि लागू हुने गरि सबै मुलुकमा रहेका अमेरिकी राजदूतलाई फिर्ता हुन उर्दी जारी गरेका हुन् । ट्रम्पले आफ्नो भनाईलाई प्रष्ट पार्दै ट्विट गरेका छन् ‘ओबामा प्रशासनद्वारा […]
डोनाल्ड ट्रम्पलाई यौनांग उपहार !
Posted on: December 28, 2016Posted by: Tirtha Khanal
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको पूर्वसन्ध्यामा डोनाल्ड ट्रम्पको ‘महिलाको यौनांगमा समाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण निकै विवादमा तानिए । सोही अभिव्यक्तिका कारण उनले चुनाव हार्ने आँकलन पनि गरियो । तर सबै अनुमानलाई गलत सावित गर्दै उनले चुनाव जिते । राष्ट्रपतिको रुपमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले अनौठो उपहार प्राप्त गर्दैछन् । विश्वभरका मानिसहरुले ट्रम्पलाई अब […]
यी हुन् संसारका दश शक्तिशाली पुटिन देखि जुगबर्ग सम्म
Posted on: December 15, 2016December 15, 2016Posted by: Tirtha Khanal
बेलायतको आर्थिक पत्रिका फोर्बस्ले संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली १० व्यक्तित्वको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीका अनुसार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगातार चौथो पटक शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । दोस्रो नम्बरमा अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहेका छन् । त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केला छिन् भने चौथो नम्बरमा चीनका राष्ट्रपति शी जिंगपिंग छन् । […]
डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै माछा !
Posted on: December 14, 2016Posted by: Tirtha Khanal
चिनियाँ मिडियामा अहिले डोनाल्ड ट्रम्प माछा चर्चामा छ । माछा मार्नेहरुले जालमा पारेर समातेको एउटा माछाको मुखाकृतिको बारेमा रोचक बहस चलेको छ र त्यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वा िचत डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गरिएको छ । ठूलो र फुलेको मुख सहितको उक्त माछाको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल बनेको छ । त्यसपछि एकाएक ट्रम्पजस्तै मुख भएका अन्य जनावरहरुका […]